Ankizy Mpitsoa-ponenana Ao Myanmar, Mizara Ny Tantarany Amin’ny Taokanto Ho An’y Maso · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Novambra 2014 9:50 GMT
Vakio amin'ny teny čeština , বাংলা, Français, македонски, Filipino, Español, polski, Deutsch, Português, 日本語, English
Miaraka amin'ny fanampian'ireo havana aman-tsakaiza, Erika Berg, Amerikana mpanoratra, no mitantana ireny atrikasa ireny noho ny antony roa : fampiroboroboana ny fandriampahalemana ao Myanmar ary fanomezana fitsaboana ireo mpitsoa-ponenana tratry ny dona mafy. Namokatra sary hosodoka maherin'ny 200 ireny seminerany ireny, izay hatambatra ho boky iray atsy ho atsy, hitondra ny lohateny hoe “Voatery nandositra: Tantara an-tsary avy amin'ireo tanora mpitsoa-ponenana ao Birmania.” Manantena i Berg ny hamoaka ilay boky amin'ny fampiasàna ny fikaroham-bola Kickstarter .
Misy maherin'ny 120.000 ireo mpitsoa-ponenana miaina amin'izao fotoana izao ao amin'ilay toby manaraka ny sisintany iraisan'i Thailand sy Myanmar. Mandritra izany, maherin'ny 100.000 avy amin'ny foko Kachin sy Shan no mbola miaina any amin'ireo toby raha ny olona nafindra toerana avy ao anatiny ihany no resahana. Fitondrana jadona miaramila no nifehy an'i Myanmar hatramin'ny 1962. Tato anatin'ny taona vitsivitsy anefa, niatrika fanovàna ara-politika ny firenena, nitondra nankany amin'ny fifidianana, fanafahana ny sasany tamin'ireo gadra noho ny politika, ary fametrahana governemanta sivily tohanan'ny miaramila.
Kanefa, mbola mijanona tsy nahitàna vahaolana ny fàkan'ny fifandiran'ny samy foko, solika mandrehitra ny ady an-trano naharitra indrindra teto amin'izao tontolo izao. Misy ezaka maro hamerenana ny fandriampahalemana efa atao any mba hampiroboroboana ny fampihavanam-pirenena, saingy mitohy manerana ny firenena ny ady an-trano. Teboka manan-danja ho an'ilay dingana marefo hikatsahana fandriampahalemana ny fifidianana hatao amin'ny taona ho avy io.
Manamafy ny lanjan'ilay tetikasa hamoaka boky i Cathy Malchiodi, mpitsabo amin'ny alàlan'ny fampiasàna ny taokanto: